भारतले बनाएको होमियोप्याथिक औषधि कोरोनाविरुद्धको भन्दै सेनाका व्यारेकमा वितरण
काठमाडौं, जेठ ८ : वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्रमाणित नभएको कोरोनाको औषधि दाबी गरिएको एक होमियोप्याथिक औषधि नेपाली सेनाको व्यारेकमा वितरण गरिएको पाइएको छ।
भारतले बनाएको आर्सेनिकम एल्बम ३० सी नामक औषधि सेनाका विभिन्न व्यारेकमा वितरण गरेको पाइएको हो। कोरोना भाइरसबाट बच्न रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भन्दै माडवारी सेवा समितिले सेनाका व्यारेकमा औषधि वितरण गरेको हो।
समाजका अध्यक्ष श्रवण अग्रावलले सेनाका व्यारेकमा औषधि वितरण गरिएको सत्य भएको बताए। ‘सेनाका व्यारेक, प्रहरीका केही कार्यालयमा हामीले औषधि वितरण गरेका छौं,’ अग्रवालले काठमाडौं प्रेससँग भने।
तर, सेनाले भने कोरोनाको औषधि विरतण गरिएको विषयमा औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै त्यसो भए गलत हुने बताएको छ। ‘अहिलेसम्म कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कुनै औषधि वितरण भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘तर, कहीँकतै औषधि वितरण भएको रहेछ र मानिसको ज्यान तलमाथि भयो भने कसले जिम्मा लिने?’
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बनाउन अहिले विश्वभरका वैैज्ञानिक रातदिन मेहनत गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा भने भारतमा उत्पादित कोरोनाबाट बचाउने औषधि भन्दै वितरण भइरहेको भेटिएको हो।
६ लाख २५ हजारलाई वितरण गरिने
माडवारी सेवा समितिले देशभरका ६ लाख २५ हजारलाई औषधि वितरण गरिने आफ्नो तयारी रहेको जनाएको छ। सेना, प्रहरी, पत्रकारसहित सर्वसाधारणसम्मलाई औषधि वितरण गरिएको उसको दाबी छ।
‘६ लाख २५ हजारलाई वितरण गर्ने योजना छ। आर्मी, प्रहरी, अस्पताल, पत्रकार र सर्वसाधारणलाई वितरण गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने, ‘उपत्यका बाहिर ३८ ठाउँमा, उपत्यकामा १८ ठाउँमा औषधि वितरण गरिरहेका छौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ मध्ये २८ वडामा वितरण गरिसकेका छौं।’
यस्तै, पत्रकार महासंघले भने देशभरका २२ सय पत्रकारलाई वितरण गर्ने भन्दै औषधि लगेको अग्रवालले बताए। ‘हामीले निशुल्क बाँडेको औषधि किन्नु परेमा करिब १२ सय रुपैयाँ पर्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट औषधि ल्याउने र यहाँ पनि केही थप गर्ने गरेका छौँ। काठमाडौंका ९ होमियोप्याथिक संस्थाले औषधि मिक्स गर्ने काम गर्छन्।’
उनले वैैशाख १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि वितरणको अनुमति समेत दिइसकेको जानकारी थिए। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले भने कुनै पनि औषधिलाई अनुमति नदिएको बतायो।
‘कुनै पनि औषधिलाई हामीले अनुमति दिएका छैनौं,’ विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने।
उनले कसैले कोरोनाको औषधि भनेर वितरण गर्छ भने त्यसलाई पक्रिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनेको बताए। ‘कोभिडको औषधि भनेर बेचियो भन्ने खबर आएको थियो। सीडीओलाई त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न भनेका छौँं,’ उनले भने।
कस्तो औषधि हो ?
अग्रवालका अनुसार ‘आर्सेनिकम एल्बम ३० सी’ भारतबाट ल्याइएको हो। ‘यसले कोरोनासँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ,’ उनले भने।
माडवारी सेवा समाजले वितरण गरेको औषधि मिक्स गर्ने काम गरिरहेका डा. बलराम किसीले औषधिले ‘इम्युन बुस्टर’को रुपमा काम गर्ने बताए। ‘यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि हो। हाल फैलिरहेको महामारीबाट बच्न ‘इम्युन बुस्टर’को रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
होमियोप्याथिक औषधि दुई गोली बिहान खाली पेटमा तीन दिनसम्म र त्यसपछि दुई गोली प्रत्येक हप्तामा आवश्यकता अनुसार महामारी नियन्त्रण नहुँदासम्म सेवन गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने उनको दाबी छ।
वैज्ञानिक पुष्टि नभएको औषधिबारे बोल्न मिल्दैन : विज्ञ
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समिरमणि दीक्षितले औषधिबारेमा आफूले पनि सुनेको तर यसबारे वैैज्ञानिक तथ्य नभएकाले बोल्न नमिल्ने बताए।
‘मैले पनि सुनेको छु। तर यसबारेमा अनुसन्धान गरी वितरण गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो अर्कै विषय हो। तर, मलाई सोध्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक तथ्य विना बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि औषधिलाई विज्ञानले प्रमाणित गर्छ। त्यसपछि मात्रै यसबारेमा बोल्न सकिन्छ।’
Published Date: Thursday, 21st May 2020 2:14:44 pm